November 7, 2021 - Celegroup
”ပံ့သကူ ” ရဲ႕အနက္အဓိပၸါယ္
November 7, 2021 Celegroup1975 0
” ပံ့သကူ “ဆိုတဲ့…စကားလုံးေလးဟာ အေတာ္မ်ားမ်ား ၾကားဘူးၾကၿပီးသားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာေတြနားနဲ႔ မစိမ္းလွပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ပံ့သကူနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လူအမ်ားနားလည္ထားၾကတာကေတာ့ အခါႀကီး ရက္ႀကီးေတြမွာ လမ္းဆုံလမ္းခြေတြ လူသူေလးပါးအသြားအလာမ်ားတဲ့ ေနရာေတြမွာ မနက္အေစာႀကီး(က်ီးမႏိုးခင္)ထၿပီးမည္သူမွ်မျမင္ေအာင္ ေငြ/ပစၥည္း တခုခုကို ပစ္ခ်ထားခဲ့ရမယ္… ဒီလို ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္….ျပဳလုပ္သူမွာလည္း ေငြေၾကးဥစၥာေတြ တိုးပြားလာလိမ့္မယ္ ဆိုတာေလာက္ကိုဘဲ အမ်ားစုက ၾကားဘူးနားဝရွိေနခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ တစိတ္တပိုင္းအေနနဲ႔ေတာ့ မွန္ပါေသာ္လည္း တကယ့္ပံ့သကူ အစစ္ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ ရည္႐ြယ္ခ်က္အျပည့္အစုံကေတာ့ ဒီထက္မက အဓိပၸါယ္ […]
ဘာျဖစ္လို႔ မိခင္ေတြက ဖခင္ေတြထက္ အရင္ အိုသြားၾကတာလဲ? “၉၀ဆ သာလိမ့္မယ္”
မိခင္ရဲ႕ ဝမ္းၾကာဗိုက္မွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ၿပီး ကေလးရယ္လို႔ ျဖစ္လာၿပီ ဆိုတာနဲ႔ မိခင္က ထိုကေလးကို ၉လတိုင္ လြယ္ပိုး ထားရာမွာ ေပါ့ပါး ေစရန္အတြက္ ကေလး ေနထိုင္ရာ သားအိမ္ အတြင္း၌ အလြန္အငံဓာတ္ ရွိတဲ့ ေရတမ်ိဳးကို သဘာဝက ထားရွိတယ္။ (ေရငံ ဟာ လူကို မနစ္ျမဳတ္ ေစဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပင္လယ္ေသ ထဲမွာ လူေတြ မနစ္ျမဳတ္ ၾကဘူး။ အဲ့ေရက အလြန္ငံတယ္) […]
ေငြကို ပိုက္ဆံအိတ္ အံဆြဲ၊ မီးခံေသတၱာ စသည္မွ ာထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထားတဲ့ နည္းစံနစ္ လိုပါတယ္။ မိမိေငြ အဝင္ မ်ားဖို႔၊ အထြက္ နည္းဖို႔၊ လာဘ္ေကာင္းဖို႔၊ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ဖို႔၊ ကံတက္ေစဖို႔၊ အဝင္ေကာင္း သလို အထြက္လည္း ေကာင္းေသာနည္းနဲ႔သာ ထြက္ဖို႔ ဖုန္းေ႐ႊ Fung Shui ပညာက အခုလို အႀကံျပဳ ပါတယ္။ ၁။ ကရေဝး႐ြက္ နဲ႔အတူ ထားပါ။ အက်ိဳးအနာ […]
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ လူတိုင်းမှာတော့ မိဘကိုယ်စီ ရှိကြမှာပါနော်။မိဘနှစ်ပါးထဲမှာမှ သားသမီးအများစုက မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ပဲ ပိုရင်းနှီးကြတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။ဖခင်တွေကတော့ မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် ရုန်းကန်ရှာဖွေနေရတာမလို့သားသမီးတွေအတွက် အချိန်မပေးနိုင်တာကြောင့် သိပ်မရင်းနှီးကြတာပါ။ တကယ်တော့ ဖခင်တွေကလည်း သားသမီးတွေကို ချစ်ကြပါတယ်။ဒီနေ့လေးမှာ ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ သားအတွက် အမြဲစဉ်းစားပေးတဲ့ မိခင်နဲ့ မိခင်မသိအောင် နောက်ကွယ်ကအမြဲဂရုတစိုက်ရှိတဲ့သား သူတို့သားအမိ နှစ်ယောက်အကြောင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ သန်းကြွယ်သဌေးကြီးက သူ့အမေကိုသွားတုစိုက်ပေးဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးသွားဆရာဝန်စီကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဆရာဝန်က အမေကြီးကိုသေချာစစ်ဆေးပေးပြီး အကောင်းဆုံးသွားတုကိုထုတ်ပြပါတယ်။ အမေကြီးက ဈေးမေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ ခေါင်းခါပြပြီး […]
သန္းေခါင္ယံက ေၾကာက္စရာလူလဲပြဲ (သို႔) တကၠစီသမား တစ္ေယာက္ရဲ႕ ထိတ္လန႔္ဖြယ္ျဖစ္ရပ္မွန္
သန်းခေါင်ယံက ကြောက်စရာလူလဲပွဲ (သို့) တက္ကစီသမား တစ်ယောက်ရဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်မှန် အထက်ပုဇွန်တောင် လမ်းမကြီး၏တစ်နေရာတွင် ဖြစ်သည်။ဝေယံစိုးသည် သူ၏ Fielder တက္ကစီကားလေးအား ကားပါကင်ထိုးပြီး ခရီးသည်အား မျှော်နေမိသည်။ ခုတလော ကားဆွဲမကောင်းလှ။ထို့ကြောင့်ညဉ့်နက် ခံပြီးဆွဲနေရ သည်။တော်သေးသည်မှာ သူ့ကားက gas ကား ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ဆီကားတွေလောက် ပူပန်စရာ မလို။ ဒါမှ မဟုတ်လျှင် အိမ်ပင်ပြန်ရမည် မဟုတ်။ သည်လိုနှင့် ည ၈နာရီ ၂၀ မိနစ်ခန့်တွင်”အောင်ခြင်းရှစ်ပါး […]
တစ်ခါတုန်းက တစ်နယ်ရပ်ခြားဆီက အပျိုကြီးတစ်ယောက်နဲ့ လူပျိကြီးတစ်ယောက်ဟာ ခရီးသွားရင်းရင်းနှီးခဲ့ကြတယ်။ သွားရမယ့်ခရီးကလဲတူနေတော့ စကားပြောရင်းအတူနားရင်း ခရီးဆက်ခဲ့ကြသတဲ့။ ညနေရီမိုးချုပ်တဲ့အခါ ရောက်တဲ့အရပ်ဒေသက နယ်မြို့လေးတစ်မြို့မှာ ခရီးတစ်ထောက်နားရင်း အိပ်စက်ဖို့အတွက် တည်းခိုရမယ့်နေရာ လိုက်ရှာတဲ့အခါ ရှားရှားပါးပါး တစ်ယောက်အိပ်ခန်း တစ်ခန်းသာကျန်တော့တဲ့ တည်းခိုခန်းတစ်ခုကိုပဲတွေသတဲ့။ မတပ်နိုင်တဲ့အဆုံး အဲဒီ့အခန်းမှာပဲ နှစ်ယောက်အိပ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြရတယ်။ အခန်းကကျဉ်းပြီး ကုတင်မပါတဲ့တည်းခိုခန်းထဲမှာ စောင်ပါးလေးတစ်ထည်နဲ့ ခေါင်းအုံးတစ်လုံးကိုအလယ်မှာချပြီး လူပျိုကြီးနဲ့အပျိုကြီးဟာ ဘယ်လူးညာလှိမ့်နဲ့ ညဉ့်နက်တဲ့အထိအိပ်မပျော်ကြပါဘူး။လူပျိုကြီးရဲ့သက်ပြင်းချသံတွေကိုလဲ အပျိုကြီးတစ်ယောက် ရင်တုန်အောင်ကြားရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ လူပျိုကြီးက အိပ်ရာကနေထလိုက်ပါတယ်။ ( […]
ဖုန်းနံပါတ် အပြဲလေးကိုင်ပြီး အမေဆီ ဖုန်းဆက်ချင်လို့ပါဆိုတဲ့ ကိုရင်လေး . . .
ဖုန်းနံပါတ်အပြဲလေးကိုင်ပြီး အမေဆီ ဖုန်းဆက်ချင်လို့ပါဆိုတဲ့ ကိုရင်လေး ” ဦးဇင်း ဖုန်းဆက်လို့ရလား ” ” ဟေ ရတာပေါ့ဘုရား ကိုရင်က ဘယ်သူဆီများဆက်မလို့လဲ” အေမ့ဆီကိုပါ ” ” ဖုန်းနံပါတ်ကော ပါရဲ့လား ” ” ပါပါတယ်ဘုရား ”လက်ထဲကြည့်လိုက်တော့ နှစ်ပိုင်းပြတ်နေတဲ့ကတ္ထူစာရွက်လေး။” ဟာ ကိုရင် ဘယ်လိုများ နှစ်ပိုင်းပြတ်နေရတာတုန်း” ပျောက်မှာစိုးလို့ သင်းပိုင်ထဲလိတ်ထားတာပြဲသွားတာဘုရား ”သြော် ကိုရင်ရယ် အမေ့ကို ဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ်လေးကို ပျောက်မှာစိုးသတဲ့ […]
နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက် ထောက်ပြတဲ့ သွေးထွက်အောင် မှန်လွန်းမက မှန်လွန်းသောမြန်မာတို့ရဲ့ အကျင့်စရိုက်…
နိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္ ေထာက္ျပတဲ့ ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္လြန္းမက မွန္လြန္းေသာျမန္မာတို႔ရဲ့အက်င့္စရိုက္ 1. လုပ္ငန္းခြင္မွာ အခ်ိတ္အဆက္ထိထိမိမိနဲ႔ တစ္စုတစ္စည္း ညီညီညြတ္ညြတ္လုပ္ဖို႔ အရမ္းအားနည္းတယ္။ (အခ်ိတ္အဆက္ အညႇိအႏွိုင္းလုပ္ဖို႔ အေလ့အထ မလုပ္လို၊ အရာရာ ကိုယ့္ေျခကိုယ့္လက္သာ ျဖစ္လိုတယ္) 2. အခ်င္းခ်င္း Sharing and Caring (ျဖန႔္ေဝေဖးမမႈ) ဆိုတာ အရမ္းအားနည္းတယ္။ (မနာလိုအားႀကီးလြန္း, ဝန္တိုလြန္လြန္းတယ္) 3. တစ္ဖက္သားရဲ့ အားနည္းခ်က္ကိုရွာၿပီး တိုက္ခိုက္တယ္၊ ကိုယ္ ေနရာရဖို႔အတြက္ပဲ စဥ္းစားတယ္။ […]
အထူးဂရုစိုက်သတိရှိကြပါနော် – သိန်း ၃၀ အလိမ်ခံလိုက်ရတဲ့ ငွေလိမ်နည်းအသစ်
အထူးဂရုစိုက်သတိရှိကြပါနော် – သိန်း ၃၀ အလိမ်ခံလိုက်ရတဲ့ ငွေလိမ်နည်းအသစ် အထူးဂရုစိုက်သတိရှိကြပါနော် ဒီနေ့ စစ်ကိုင်းဘက်က လူတစ်ယောက် ကျနော့်ရုံးကိုရောက်လာတယ်။ငွေလွှဲလက်ခံသူဖုန်းလိုချင်လို့ ဝေ့ရုံးဘက်ကိုမေးပေးဖို့ အကူအညီတောင်းခံလာတယ်။ကျနော်လဲ ပြသာနာတစ်စုံတစ်ရာတော့ ရှိနေပြီ ထင်လို့ မေးကြည့်လိုက်တယ်။ သူ့တူမတစ်ယောက်အလိမ်ခံရလို့ပေါ့ အလိမ်ခံရတယ်ဆိုတာထက် ဓားစာခံ သဘောမျိုးပါ။ကောင်မလေးကို အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကဖေ့ဘွတ်မှာ အလုပ်အကိုင်ကောင်းကြောင်း သူ့ပို့စ်တွေကို ရှယ်ပေးရင် ဘောနပ်ပေးကြောင်း အစပိုင်းမှာ ၂ သောင်း ဘောနပ်ပေးတယ် ရှယ်ပေး လို့ပေါ့။ ပြီးခဲတဲ့အပတ်က ပို့တစ်ခုကို […]
ဦးဆိုရင် ကြောက်နေရသည် …. ဖုန်းဝင်လာလို့ ကောက်ကိုင် လိုက်တာ ဖေ့ဘုတ် ပေါ် မှာ မနေ့ကမှ ချစ်သူ ဖြစ်သွားတဲ့ ခေးလေးရဲ့ ဖုန်းဖြစ်နေတော့ ကျုပ် ပျော် သွားတယ်။ “ဦး” “ပြော ခလိန်း” “ဦး ပျော်လို့ရပြီ သိလား” ချိန်းတွေ့ တော့မယ် ထင်တယ်လို့ တွေး မိပြီး ကျုပ် ပီတိတွေ ဖျာနေ မိတယ် ။ “အွန်း ဘာလို့လဲ” […]